Author Topic: Heerarka Foosha (Stages of Labor) (Read 18389 times)
« on: January 02, 2009, 09:59:49 PM »
Marka uu hadba soo dhawaado dhalashada ilmahaagu, waxa fiican oo gargaar leh in aad wax ka baratid 3-da heer ee foosha.
Heerka Koobaad ee Foosha
Heerka koobaad waa bilawga foosha waxana uu socdaa ilaa afka ilmogaleenku si buuxda u furmayo taasoo ah 10 sentimitir. Kani waa heerka foosha ee ugu dheer waxana uu socon karaa 12 ilaa 17 saacadood.
Heerkan waxa loo kala qaybin karaa foosha hore, foosha firfircoon iyo kalaguurka.
1. Inta lagu jiro foosha hore, afka ilmo-galeenku waa uu furmaa taasoo ka bilaabmaysa 0 ilaa 3 sentimitir. Maroojintu ama fool-qabashadu waxay socon kartaa 30 ilaa 60 daqiiqo waxana ay dhici kartaa 5-tii ilaa 20-kii daqiiqadood kasta. Waxa laga yaabaa in dheecaan casaan ah, dhiig leh ama xab ah uu ka yimaado hoos. Waxa kale oo laga yaabaa in dhabarxanuun, lallabo iyo shuban uu yimaado.
2. Inta lagu jiro foosha firfircoon, afka ilmo-galeenku waa uu weynaadaa ilaa 7 sentimitir. Fool-qabashooyinku way sii xoogeystaan oo sii dheeraadaan, iyaga oo jiraya qiyaastii 1 daqiiqad soona noqonaya 2-dii ilaa 4-tii daqiiqadood kasta. Waxa laga yaabaa in dawada xanuunka wakhtigan lagu siiyo.
3. Inta lagu jiro kala-guurka, afka ilmo-galeenku waa uu sii weynaadaa ilaa 10 sentimitir. Fool-qabashooyinku way ka sii xoog badan yihiin waxana ay dhacaan marrar ka sii badan intii hore. Waxa laga yaabaa in cadaadis weyn laga dareemo dhabarka dambe iyo malawadka.
Waxa aad sameyn kartid:
Is dabci inta u dhexeysa fool-qabashooyinka. Isticmaal tabaha neefsashada ama isdabcinta ee aad ku baratay fasalada dhalmada ama gargaar weydiiso kalkaalisadaada. Ha riixin ilaa laguu sheego inaad sidaa sameysid.
Waxa wehelkaagu sameyn karo:
Dhiirigali oo deji. Inta lagu jiro foosha hore, ka gargaar beddelidda habka jiifka 1-kii ilaa 2-dii saacadood kasta. Sii qaybo ah baraf iyo labeenta dibnaha. Isticmaal ereyo dhiirigalin leh.
Heerka Labaad ee Foosha
Heerka labaad waxa uu bilaabmaa marka afka ilmo-galeenku si buuxda u furan yahay waxana uu socdaa ilaa ilmuhu dhalanayo, taasoo qaadata qiyaastii 1 ilaa 2 saacadood. Inta lagu jiro wakhtigan, shaqaalaha ayaa kuu sheegi doona goorta aad riixi kartid isla markaana gargaar ka geysan kara taageeridda jirkaaga marka aad dhalaysid ilmahaaga.
Waxa lagugu dhiirigalin doonaa in aad riixid la sameysid foolqabasho kasta.
Waxa laga yaabaa in laguu sheego in aad si tartiib ah u riixdid ama aad joojisid riixidda marmarka qaarkood.
Taageer jirkeeda inta lagu jiro dhalista. Dhiirigali oo ka gargaar tirinta inta ay riixayso.
Heerka Saddexaad ee Foosha
Heerka saddexaad waa soo-bixista mandheerta ka dib dhalmada. Kani waa heerka ugu gaaban foosha, waxana uu socdaa 15 ilaa 20 daqiiqadood.
Waxa adiga iyo wehelkaagu sameyn kartaan:
Is dejiya oo wakhtigan ku istareexa ilmaha.
Haddii aad qabtid wax su’aalo ama walaac ah, halkaan ka weydii.
Re: Heerarka Foosha (Stages of Labor)
« Reply #1 on: September 03, 2009, 12:01:49 PM »
first stage dilation till 10cm secend stage frm full dilation till delivery 3rd stage delivery of placenta n membranes
Su'aal: Foosha badan ee dumarka somalida?
Started by Iman OsmanBoard Qaybta Su'aalaha
Views: 2361 December 18, 2018, 11:07:40 PM
Su'aal: Xulbada foosha ma soo dadajisaa?
Views: 10906 January 14, 2016, 11:40:29 AM
Su'aal: Xaalada foosha haweenka?
Views: 2649 April 11, 2016, 12:01:58 PM
Views: 3421 September 04, 2012, 10:38:25 PM
Views: 69106 December 13, 2007, 02:18:40 PM